Tag: aabaco | Martech Zone
Ngwa ngwa ahia kachasị ngwa ngwa maka Desktọpụ na ekwentị
Ọsọ bụ ego. Ọ dị mfe dị ka nke ahụ mgbe a bịara n'ịzụ ahịa e-commerce. Ọ bụghị naanị ndị na-azụ ahịa na-ahapụ saịtị gị mgbe ọ naghị eme nke ọma na desktọọpụ ma ọ bụ ekwentị. Ebe ntanetị na ibe ọsọ ọsọ na-emetụta nchọta ọchụchọ yana. Nchọgharị ọchụchọ achọghị ka ndị ọrụ nwee nkụda mmụọ mgbe ha gara na saịtị nwayọ nwayọ, yabụ enweghị uru ọ bụla n'iji ha rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ikpo okwu e-commerce gị na-ebu nwayọ ma ọ bụ nwee ahụmịhe onye ọrụ mkpanaka, ị nwere ike ịhapụ